सेतो दुबी रोग होइन, यस्तो छ उपचार तरिका :: Setopati
सेतो दुबी रोग होइन, यस्तो छ उपचार तरिका
कतिपयलाई सेतो दुबीले पिरोलिरहेको हुन्छ। अनुहार वा शरीरका कुनै भागमा सेतो दागले नराम्रो देखाउने हुँदा यसलाई ठूलो समस्याका रुपमा लिने गरेको पाइन्छ। साथै यसलाई निको नहुने सरुवा रोगको रुपमा बुझिन्छ।
छालामा हुने एक समस्या हो, सेतो दुबी। दुबी आएका व्यक्तिको उमेर र अवस्थाअनुसार ठीक हुने समय निर्धारण गर्न सकिने छाला विशेषज्ञ डा. धर्मेन्द्र कर्णले बताए।
नेपालमै सेतो दुबीको उपचार हुन सक्ने उनी बताउँछन्। यो समस्या ठिक हुन बच्चालाई भन्दा ठूला व्यक्तिलाई धेरै समय लाग्छ।
‘साना बच्चामा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढदोक्रममा हुन्छ, तर जति उमेर बढ्दै गयो त्यो क्षमता तुलनात्मक रुपमा घट्दै जान्छ यसकारण पनि बढी उमेरका व्यक्तिलाई ठिक हुन समय लाग्छ’, डा. कर्णले भने ‘सेतो दुबी आएका ४० वर्षभन्दा बढी उमेरका र कपाल फुलिसकेका जो व्यक्ति छन्, उनीहरुलाइ निको हुन केही वर्ष पनि लाग्नसक्छ।’
के हो सेतो दुबी?
शरीरमा छालालाई रङ दिने कोषहरुको कमि भएर देखापर्ने समस्या हो, सेतो दुबी।
‘हरेक व्यक्तिको शरीरमा रोगसँग लड्ने क्षमता हुन्छ त्यो क्षमता कहिलेकाही बढी भएर आफ्नै शरीरविरुद्ध काम गर्छ। जसले गर्दा छालालई रङ दिने कोषहरु नष्ट हुनपुग्छन्’ डा. कर्णले भने।
‘सेतो दुबीको समस्या जुनसुकै उमेर समूहकालाई हुनसक्छ, तर १० देखि २० र ४० देखि ५० वर्षसम्मका व्यक्तिमा तुलानात्मक रुपमा बढी देखापर्छ’, उनले थपे। सेतो दुबी १० देखि ३० प्रतिशत वंशाणुगत हुनसक्छ।
सेतो दुबीलाई रोग मानिदैन। यो समस्या हुँदा दुख्ने, पोल्ने हुँदैन। ‘सेतो दुबीको उपचार नगर्दा पनि केही फरक नपर्ने डा. कर्ण बताउँछन्।
सेतो दुबी कसरी आउँछ
हाम्रो छालालाई सेतो वा कालो रंग दिने एक प्रकारको ‘मेलानोसाईट’ हुन्छ। जसले मेलालीन बनाउँछ। जुन एक किसिमको ‘केमिकल’ हो। यसले छालालाई पुरै शरीरमा रङ दिन्छ। उक्त रङ जसको शरीरमा बढी हुन्छ त्यस्तो छालालाई कालो छाला र जसकोमा कम हुन्छ त्यस्तो छालालाई गोरो छाला भनिन्छ।
नेपालीहरुको छाला भने माध्यम किसिमका पर्छ, न कालो न गोरो गहुँगोरो।
कुनै व्यक्तिको छालामा रङको समस्या बढी हुनसक्छ र कम पनि हुनसक्छ, बढी भएकोमा कालो दाग भनिन्छ र कम भएमा सेतो दाग भनिन्छ। जसलाई बोलीचालीको भाषामा सेतो दुबी भनिन्छ।
डा कर्ण भन्छन् ‘यो रङमा भएको एउटा परिवर्तन मात्रै हो, त्यसैले शरीरमा कुनै असर गर्दैन।’
ओठमा र औंलामा आउने दूबी बढी आक्रामक
सेतो दुबी प्रायजसो धेरै चलिरहने अंगहरुमा देखापर्ने जस्तैः ओठ, आँखा, कुइना, कम्मर, घुडा। यो अरुलाई सर्दैन तर आफ्नै जिउमा फैलिनसक्छ। सेतो दुबी पनि दुई किसिका हुन्छन्ः सेगमेन्टल र नन सेगमेन्टल।
शरीरको एउटै अंगमा मात्रै आउने वा एउटै साइडमा मात्रै आउने सेगमेन्टल हो। शरीरको सबैतिर फैलिने नन सेगमेन्टल दुबी हो। तीमध्ये ओठमा र औंलामा आउने दूबी बढी आक्रमक किसिमको हुने डा. कर्णले जानकारी दिए। यस्तो दुबी ठिक हुन समेत समय लाग्छ। यससँगै सबैभन्दा बढी चल्ने अंगहरुमा आएका सेतो दुबी निको हुन पनि समय लाग्छ।
सेतो दुबीमा के गर्न हुँदैन?
सेतो दुबी आएका व्यक्तिले चोटपटक लाग्ने काम गर्नु नहुने डा. कर्णको सुझाव छ। उनीहरुले टाइट कपडा टाइट जुत्ताहरु समेत लगाउनु हुँदैन।
त्यस्ता व्यक्तिले घाममा बस्नु फाइदाजनक मानिन्छ। तर, नरम खालको घाममा मात्र बस्नुपर्छ। बिहान ८ बजेदेखि ११ बजेसम्मको घाम र दिउँसो २ देखि ५ बजेबीचको घाममा बस्दा राम्रो हुन्छ। ११ देखि २ बजेसम्मको घामले भने छालालाई असर गर्ने डा. कर्णले सुझाए।
सेतो दुबी भएको व्यक्तिले धुम्रपान/मद्यपान बाहेक सबै खानेकुरा खान हुन्छ।
सेतो दुबीको उपचार कसरी गरिन्छ?
सेतो दुबीको उपचार दुई तरिकाबाट गरिन्छ। एउटा औषधि लगाउने/खाने र घाममा देखाउने। अर्को मेसिनमा सेक्ने जसलाई ‘फोटोथेरापी’ भनिन्छ। यो प्रविधि गर्भवती महिला र भर्खरै जन्मेको बच्चालाई समेत दिन मिल्ने डा. कर्णले जानकारी दिए। उक्त प्रविधिबाट पनि ठिक नभए शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुनसक्छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत ४, २०७६, ०५:५८:००
विदेश जानका लागि पिसिआर कहाँ गर्ने, सरकारीदेखि निजी ल्यावको सूची